အွန်လိုင်းပေါ်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ကလေး နှစ်ယောက် ရဲ့ လုပ်ရပ် - MM Live News
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ကလေး နှစ်ယောက် ရဲ့ လုပ်ရပ်
အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းထဲမှာ ခွေးလေးတွေ အစားကောင်းကောင်းစားရမှာပဲ….. သနားစရာကလေးနှစ်ဦး
လတ်တလော ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် ပေါ်မှာ အကောင့်ပိုင်ရှင် Swe Swe Oo ဆိုသူရဲ့ ပို့စ်တစ်ခုကို တွေ့ခဲ့ရပြီး ဒါဟာ ကလေးငယ်လေးနှစ်ဦးရဲ့ ကြင်နာတတ်တဲ့ စိတ်နှလုံးထားကောင်းကို အင်တာနာသုံးစွဲသူတွေ မြင်တွေ့ခဲ့ရကာ မျက်ရည်လည်စရာ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
အကောင့်ပိုင်ရှင်ရဲ့ ရေးသားမျှဝေမှုအရ သူဟာ အိမ်ရှေ့ကို ရောက်နေတဲ့ ကလေးနှစ်ယောက် ဘာလုပ်မလဲ ဆိုတာကို သိရအောာင် စီစီတီဗွီ ကနေ တဆင့် အကဲခတ်စောင့်ကြည့်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
စီစီတီဗွီ ရုပ်သံမှတ်တမ်းအရ ကလေးနှစ်ဦးဟာ အစကတော့ ခွေးလေးတစ်ကောင်ကို ပိုက်ပြီး အဲ့ဒီ အိမ်ရှေ့မှာ လာထားသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တော့ ခွေးလေးကို စိတ်မချဟန်နဲ့ ခြံတံခါး သံတိုင်ကြားကနေတဆင့် အိမ်ထဲကိုပါ တခါထည့်သွားဖို့ ကြိုးစားပါတော့တယ်။
နောက်ဆုံးမှာ ခွေးလေး အိမ်ထဲ မရမက ထည့်ပေးလိုက်နိုင်ကြပြီး အိမ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ Swe Swe Oo ဆိုသူကလည်း ခွေးချစ်တတ်သူဖြစ်တာကြောင့် ဒီဖြစ်ရပ်ကို အသာစောင့်ကြည့်နေခဲ့တာပါ။ ခွေးလေး ခြံတံခါး အပေါ်ဘက်ကနေ တဆင့် ခြံဝင်းကြမ်းပြင် ပေါ် ပြူတ်ကျသွားတဲ့အခါ ကလေးခမျာ သူ့ရဲ့ခွေးလေး အပေါ် စိတ်ပူပြီး အကြိမ်ကြိမ်ပြန်လှည့်ကြည့်နေပြီးမှ စိတ်ချလက်ချရှိစွာနဲ့ ထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
သနားစရာကလေးနှစ်ဦးရဲ့ အသိစိတ်နဲ့ ရင်ထဲမှာတော့ ငါတို့ဘဝက စားဖို့အနိုင်နိူင်ဆိုပေမဲ့ ခွေးလေးအတွက်က အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းထဲမှာ အစားကောင်းကောင်းစားရမှာပဲ ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ခွေးလေးကို အိမ်ထဲလာထည့်သွားကြပုံရပါတယ်။
ကလေးလေးတွေရဲ့လုပ်ရပ်က AlinnMyay(အလင်းမြေ) ချစ်ပရိသတ်ကြီးကိုလည်း ဆို့ဆို့နင့်နင့်ဖြစ်စေခဲ့မှာ သေချာပါတယ်။ အဲ့ဒီ ဗွီဒီယို ဖိုင်လေးကိုလည်း တပါတည်း တွဲဖက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်နော်။
အဲ့ဒီပို့စ်ကို တင်ခဲ့တဲ့ အိမ်ရှင်ဖြစ်သူ Swe Swe Oo အကောင့်ပိုင်ရှင်ကတော့ ခွေးလေးကိုထမင်းကျွေးပေးပြီး ခေါ်ယူမွေးထားလိုက်ကြောင်း သိရပြီး သူ့ရဲ့ပို့စ်အရ “အိမ်ကcctv monitor ကနေ ကြည့်နေတာ ဒီကလေး ၂ယောက်
အိမ်ရှေ့မှာ ဘာလုပ်မလဲဆိုတာကို သူတို့ခေါ်လာတဲ့ ခွေးလေး ကို ပိုက်ပြီး အိမ်ရှေ့က လုံခြုံရေးဂိတိမှာသွားထားတယ်။ ပြီးတော့စိတိမချလို့ အိမ်ထဲကို ထည့်ဖို့ကြိုးစားပြီး အောက်ကထည့်မရတော့အပေါ်ကနေ မရမကထည့်ရှာတယ်ခွေးလေးလည်း ပြုတိကြသွားတော့သူ့ခင်ဗျာ စိတိပူ ပြီး ခဏခဏ ပြန်ပြနိကြည့်ရှာတယ်။
ကိုယိကလည်း ခွေးချစ်တတိသူမို့ နေပလေ့စေဆိုပြီးကြည့်နေလိုက်တယ်။ခွေးအသံလေးကြားတော့ထမင်းကျွေးပြီးခေါ်ထားလိုက်တယ်။ ကတုံးမလေးအတွေးမှာ ဒီအိမ်ကြီးထဲမှာခွေးလေး နေနေရရင် အစားကောင်းကောင်းစားရမှာပဲတွေးပြီး လာထားသွားတာနေမယ်။
ဆင်းရဲ သည်ဖြစ်စေ ချမ်းသာသည်ဖြစ်စေ လူတိုင်းလူတိုင်း မှာ ကြင်နာတတိတဲ့နှလုံးသာတွေ ကောင်းစားပါစေဆိုတဲ့ စိတ်စေတနာတွေ ရှိတတိကြပါတယ်။ မတတိသာတဲ့ အခြေအနေမို့ပါ။ကလေးလေး ၂ယောက်ရဲ့ အိမ်အပြန်ခြေလှမ်းတွေဟာ ပေါ့ပါးလန်းဆန်းနေလေရဲ့ 😊” လို့ ရေးသားထားတာကို တွေ့ခဲ့ရတာ​ပါ။
သြော် ဘဝတွေက ခါးသီးလွန်းတော့ သူတို့ဘဝလေးတွေ စားဖို့အနိူင်နိူင်ဖြစ်နေပေမဲ့ သူတို့ ချစ်တဲ့ ခွေးလေးကျတော့ကောင်းကောင်းစားစေချင်လို့ ဒီအိမ်ကြီးမှာ ခွေးလေးကောင်းကောင်းနေ ကောင်းကောင်းစားရမှာဘဲ ဆိုပြီး လာထားခဲ့ရှာတယ်။
အပြန်သူတို့ ခွေးလေး အတွက် သူတို့ရင်ထဲမှာ ပျော်ခြင်း ဝမ်းနည်းခြင်း နှစ်ခုမျှနေမှာပဲနော်။ ဘဝကြီးသာယာလှပပါစေကလေးတို့ရယ်။မွေးပေးလို့ ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။ မိသားစုတွေ ဒီထက်ပိုပြီး ကျန်းမာ သက်ရှည် စီးပွား တိုးတက်ပါစေ လို​့လည်း ကရုဏာ မုဒိတာ နဲ့ ဆုတောင်းပေးနေဖြစ်ပါတယ် AlinnMyay(အလင်းမြေ) ချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့ရေ။
EFIL-AlinnMyay(အလင်းမြေ) Video Source. Swe Swe Oo Fb
အိမ္ႀကီးအိမ္ေကာင္းထဲမွာ ေခြးေလးေတြ အစားေကာင္းေကာင္းစားရမွာပဲ….. သနားစရာကေလးႏွစ္ဦး
လတ္တေလာ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ေပၚမွာ အေကာင့္ပိုင္ရွင္ Swe Swe Oo ဆိုသူရဲ့ ပို႔စ္တစ္ခုကို ေတြ႕ခဲ့ရၿပီး ဒါဟာ ကေလးငယ္ေလးႏွစ္ဦးရဲ့ ၾကင္နာတတ္တဲ့ စိတ္ႏွလုံးထားေကာင္းကို အင္တာနာသုံးစြဲသူေတြ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရကာ မ်က္ရည္လည္စရာ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။
အေကာင့္ပိုင္ရွင္ရဲ့ ေရးသားမၽွေဝမႈအရ သူဟာ အိမ္ေရွ႕ကို ေရာက္ေနတဲ့ ကေလးႏွစ္ေယာက္ ဘာလုပ္မလဲ ဆိုတာကို သိရေအာာင္ စီစီတီဗြီ ကေန တဆင့္ အကဲခတ္ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
စီစီတီဗြီ ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းအရ ကေလးႏွစ္ဦးဟာ အစကေတာ့ ေခြးေလးတစ္ေကာင္ကို ပိုက္ၿပီး အဲ့ဒီ အိမ္ေရွ႕မွာ လာထားသြားတာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ေခြးေလးကို စိတ္မခ်ဟန္နဲ႔ ၿခံတံခါး သံတိုင္ၾကားကေနတဆင့္ အိမ္ထဲကိုပါ တခါထည့္သြားဖို႔ ႀကိဳးစားပါေတာ့တယ္။
ေနာက္ဆုံးမွာ ေခြးေလး အိမ္ထဲ မရမက ထည့္ေပးလိုက္နိုင္ၾကၿပီး အိမ္ရွင္ျဖစ္တဲ့ Swe Swe Oo ဆိုသူကလည္း ေခြးခ်စ္တတ္သူျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒီျဖစ္ရပ္ကို အသာေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့တာပါ။ ေခြးေလး ၿခံတံခါး အေပၚဘက္ကေန တဆင့္ ၿခံဝင္းၾကမ္းျပင္ ေပၚ ျပဴတ္က်သြားတဲ့အခါ ကေလးခမ်ာ သူ႔ရဲ့ေခြးေလး အေပၚ စိတ္ပူၿပီး အႀကိမ္ႀကိမ္ျပန္လွည့္ၾကည့္ေနၿပီးမွ စိတ္ခ်လက္ခ်ရွိစြာနဲ႔ ထြက္သြားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
သနားစရာကေလးႏွစ္ဦးရဲ့ အသိစိတ္နဲ႔ ရင္ထဲမွာေတာ့ ငါတို႔ဘဝက စားဖို႔အနိုင္နိူင္ဆိုေပမဲ့ ေခြးေလးအတြက္က အိမ္ႀကီးအိမ္ေကာင္းထဲမွာ အစားေကာင္းေကာင္းစားရမွာပဲ ဆိုတဲ့ အေတြးနဲ႔ ေခြးေလးကို အိမ္ထဲလာထည့္သြားၾကပုံရပါတယ္။
ကေလးေလးေတြရဲ့လုပ္ရပ္က AlinnMyay(အလင္းေျမ) ခ်စ္ပရိသတ္ႀကီးကိုလည္း ဆို႔ဆို႔နင့္နင့္ျဖစ္ေစခဲ့မွာ ေသခ်ာပါတယ္။ အဲ့ဒီ ဗြီဒီယို ဖိုင္ေလးကိုလည္း တပါတည္း တြဲဖက္တင္ဆက္ေပးလိုက္ရပါတယ္ေနာ္။
အဲ့ဒီပို႔စ္ကို တင္ခဲ့တဲ့ အိမ္ရွင္ျဖစ္သူ Swe Swe Oo အေကာင့္ပိုင္ရွင္ကေတာ့ ေခြးေလးကိုထမင္းေကၽြးေပးၿပီး ေခၚယူေမြးထားလိုက္ေၾကာင္း သိရၿပီး သူ႔ရဲ့ပို႔စ္အရ “အိမ္ကcctv monitor ကေန ၾကည့္ေနတာ ဒီကေလး ၂ေယာက္
အိမ္ေရွ႕မွာ ဘာလုပ္မလဲဆိုတာကို သူတို႔ေခၚလာတဲ့ ေခြးေလး ကို ပိုက္ၿပီး အိမ္ေရွ႕က လုံျခဳံေရးဂိတိမွာသြားထားတယ္။ ၿပီးေတာ့စိတိမခ်လို႔ အိမ္ထဲကို ထည့္ဖို႔ႀကိဳးစားၿပီး ေအာက္ကထည့္မရေတာ့အေပၚကေန မရမကထည့္ရွာတယ္ေခြးေလးလည္း ျပဳတိၾကသြားေတာ့သူ႔ခင္ဗ်ာ စိတိပူ ၿပီး ခဏခဏ ျပန္ျပနိၾကည့္ရွာတယ္။
ကိုယိကလည္း ေခြးခ်စ္တတိသူမို႔ ေနပေလ့ေစဆိုၿပီးၾကည့္ေနလိုက္တယ္။ေခြးအသံေလးၾကားေတာ့ထမင္းေကၽြးၿပီးေခၚထားလိုက္တယ္။ ကတုံးမေလးအေတြးမွာ ဒီအိမ္ႀကီးထဲမွာေခြးေလး ေနေနရရင္ အစားေကာင္းေကာင္းစားရမွာပဲေတြးၿပီး လာထားသြားတာေနမယ္။
ေၾသာ္ ဘဝေတြက ခါးသီးလြန္းေတာ့ သူတို႔ဘဝေလးေတြ စားဖို႔အနိူင္နိူင္ျဖစ္ေနေပမဲ့ သူတို႔ ခ်စ္တဲ့ ေခြးေလးက်ေတာ့ေကာင္းေကာင္းစားေစခ်င္လို႔ ဒီအိမ္ႀကီးမွာ ေခြးေလးေကာင္းေကာင္းေန ေကာင္းေကာင္းစားရမွာဘဲ ဆိုၿပီး လာထားခဲ့ရွာတယ္။
အျပန္သူတို႔ ေခြးေလး အတြက္ သူတို႔ရင္ထဲမွာ ေပ်ာ္ျခင္း ဝမ္းနည္းျခင္း ႏွစ္ခုမၽွေနမွာပဲေနာ္။ ဘဝႀကီးသာယာလွပပါေစကေလးတို႔ရယ္။ေမြးေပးလို႔ ေက်းဇူးပါခင္ဗ်ာ။ မိသားစုေတြ ဒီထက္ပိုၿပီး က်န္းမာ သက္ရွည္ စီးပြား တိုးတက္ပါေစ လို​့လည္း က႐ုဏာ မုဒိတာ နဲ႔ ဆုေတာင္းေပးေနျဖစ္ပါတယ္ AlinnMyay(အလင္းေျမ) ခ်စ္ပရိသတ္ႀကီးတို႔ေရ။
EFIL-AlinnMyay(အလင္းေျမ) Video Source. Swe Swe Oo Fb
” ဖြိုးပြည့်စုံတို့ (၃) ယောက်က အသာတကြည် အဖမ်းခံသော်လည်း ရိုက်နှက်ဖမ်းတဲ့သူကို အရေးယူပေးဖို့ တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ ဦးအောင်ရင်”
နေ့ခင်းကြောင်တောင် ရန်ကုန်မြို့လယ်ခေါင်မှာ ရွှေတွေယူ လူသတ်မှုဖြစ်
မုဒိတာ အသင္းကားမွန္ကို တပ္မေတာ္အရာရွိမွ ရိုက္ခြဲတဲ့ ကိစၥ ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္း
အောင်လအန်ဆန်ကို အားပေးကြမ်း ချစ်ကြတဲ့ မြန်မာလူမျိုးများ
October 14, 2019 MM Live